क्रिश्चियन र्यागिङ,हरेक विहान बेल बज्दा तनाव - Asian Samachar
क्रिश्चियन र्यागिङ,हरेक विहान बेल बज्दा तनाव
Asian Samachar बुधबार, पुस २०, २०७३ (11 months ago) देश, बिचार/ब्लग
विहानै दैलोमा वेल बज्छ । पुसमाघको कठाङ्ग्रीने चिसोमा मेरो घरबाट न्यानो विस्तरा छोडेर कोही न कोही ढोका खोल्न पुग्छन् । आँखा मिच्दै ढोकामा जाँदा सिडीइ प्लेयर जस्तो वाइवलको प्रवचन सुरु हुन्छ ।
कसैले वाहिर एकैछिन भन्दै हात समातेर प्रवचन दिन सुरु गर्छन कसैले भित्रै पस्न जवर्जस्ती गर्दा रहेछन् । यहि साता एक दिन वेल वज्दा म आफै उठेर गएँ मैले ठाने बच्चालाई दुध पुर्याउने मान्छेले बेल वजाएको हुनुपर्छ ।
सर एकै छिन तपाईलाई वाइवल वारे केहि थाह छ ? प्रश्न तेर्सियो म माथि मैले जवाफ दिएँ अहँ मलाई थाह छैन र थाहा पाउनु पनि छैन । जाडोले ओठ काँपीरहेको त्यो भाइले अनुरोध गर्यो सर प्लिज एकै छिन मात्रै सुनि दिनुस ।
मैले सर्त राखें ओके तिम्रो पनि यो रोजीरोटीकै कुरा होला । तर अवदेखि कहिल्यै मेरो घरमा वाइवल वारे प्रवचन सुनाउन नआउने गरि आज तिम्रो कुरा एक छिन सुनि दिन्छु । तिम्रो वाइवलको सार भन समय ३ मिनेट । यो भन्दा वढी म जाडोमा वाहिर उभिन सक्दिन ।
उसले भन्यो सरलाई म आज मृत्यु पछिको जीवन वारे सुनाउछु । मैले भने बस भयो भाई मलाई जिन्दगीमा दुइटा कुरा सुन्नु छैन । एउटा जन्म अघिको कुरा र अर्को मृत्यु पछिको कुरा ।
उसले परमेश्वरले यस रहस्यवारे जानकारी दिनु भएको छ भन्दै आफ्नो प्रवचन भन्दै थियो मैले ढोका वन्द गर्दै भने सरी भाई अस्तित्व वाहिरको कुनै रहस्य जानेर मलाई दुनियामा कुनै नयाँ आविष्कार गर्नु छैन न त जादु गर्नु छ ।
म भित्र पसें सायद ऊ मुमुर्रिदै हिड्यो होला । अर्को दिन फेरि त्यहि नियति सुरु भयो अर्को एकजना अर्धवैंसे आईमाइ हातमा वाइवल लिएर ढोकामा आइपुगिन् । वेल वजाइन वाहिर जाँदा परमेश्वरकी साक्षात दुत उनी पनि कहाँ कम हुन्थिन् वाइवल वारे भट्टयाउन थालि हालिन् ।
मैले आफु कुनै पनि धर्मप्रति आस्था र विश्वास नराख्ने मानिस भएको वताँए । उनले भनिन् प्रभुले तपाईलाई नर्कमा पठाउनुहुन्छ । मैले सोधें किन ? उनले जवाफ दिइन किनकी प्रभुले यस्ता मानिसहरुलाई रुचाउनु हुँदैन ।
प्रभुको इच्छा विपरित वोल्ने मानिसहरु नर्कमा जान्छन् । मैले ति दिदिलाई भने ठिक छ स्वर्गको ढोकाको चावी तपाइको प्रभुको हातमा छ उनले आफुले नरुचाएका मानिसहरुका लागि ढोका नखोल्न सक्छन ।
तपाईको भनाई अनुसार स्वर्गको चावी प्रभुसंग छ । त्यसमाथि उनको कुरा नमानेपछि तपाईको प्रभुले आफ्नो नियम कानुन पुलिस प्रशासन के के लगाएर मलाई नर्कमै पठाउलान् । तर म तपाईको प्रभु कहाँ नै जाँदैन, मलाई त्यस प्रभुको मृत्युपछि पनि जरुरी छैन जसले स्वर्ग र नर्कको ठेक्का लिन्छ ।
त्यस्ता ठेकेदारकहाँ सायद कोहि जाँदैन । अर्को कुरा दिदि यो प्रत्यक नेपाली नागरिक जसको क्रिश्चियनसंग कुनै लेनदेन छैन उनीहरुको घरमा यसरी दिनहु –यागिङ गर्न थालेपछि तपाईलाई पुलिस कष्टडीमा पठाउछन् त्यसबेला त्यहाँ तपाईको प्रभुको स्वर्ग र नर्कको कुनै हिसाव किताव हुने छैन ।
कृपया तपाईको स्वर्गमा तपाईको प्रभु मार्फत तपाई आफै जानुस हामी लालायीत छैनौ प्रभुको स्वर्गमा वस्न । उनी चुपचाप हिडिन् प्रभुले वोलाए वा आफै गइन थाह भएन । म नास्तिक मान्छे मलाई कुनै धर्मसंग लेनदेन छैन तर यो क्रिश्चियन मित्रका मार्केटीङका केटा– केटीहरुले गरेको दिनहुँको र्यागिङपछि मेरो नेपालका प्रचलित धर्म र तीनको व्यवहारमा कम्तीमा साहनुभुति रह्यो ।
बहुसंख्यक हिन्दुहरुले कहिल्यै हातमा धर्मग्रन्ध लिएर मार्केटिङ गर्दै मानिसहरुलाई हैरान वनाएनन् । गएका २५ सय वर्षयता नेपालमा वुद्ध धर्म र दर्शनको निकै ठूलो प्रभाव छ, वौद्ध भिक्षुहरु देखि वुद्धिष्टहरुले कहिल्यै मार्केटिङ गर्दै कसैको ढोका ढकढकाएनन्, काठमाडौको जामे र काश्मिरी मस्जिदको इतिहास झण्डै १२, १३ बर्ष लामो छन् मुस्लिमहरुले परम्परा अनुसार मस्जिदमा माइकिङ गरेपनि घर घरमा मानिसहरुको प्राइभेट जीवनको समय खर्च हुने गरि हैरान वनाएनन् यो क्रिश्चियन मित्रहरुले वुझ्न जरुरी छ ।
दक्षिण अफ्रिकि राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले एउटा भाषणमा भनेका थिए वेलायतिहरु हातमा एक वाइवल वोकेर हाम्रो धर्तिमा आएका थिए आज केहि दशक पछि हामी हातमा वाइवल लिएर रित्तै खडा भएका छौं । उनीहरुले वाइवल हामीलाइ वुझाएर सम्भ्रान्त जीवनशैली विताइरहेका छन् ।
समाजको सम्पुर्ण प्रभुत्व अर्थ, राजनीति, पेशा, व्यवशाय र सामाजिक रिति रिवाज उनीहरुले आफु अनुकुल वनाएका छन् र यो सम्पूर्ण शासनसत्ता उनीहरुको हातमा छ । अधिकार विहिन प्रभुका भक्त हामीसंग त्यहि थोत्रो वाइवल वाहेक केहि छैन । निकट भविष्यमै नेपालीहरु पनि त्यहि हालतमा पुग्ने दिनहरु नजिकिदै छन् ।
नेपाली सेनाका दुई सहायकरथी उपरथीमा बढुवा
पूर्व राष्ट्रपतिको घरभाडा सम्बन्धमा शीतलनिवासको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक